Semalt Expert Blocker Zano: 5 Nzira dzekuvhara maIndaneti Pa Chrome
Mawebhusayithi ndiwo mazano akanaka kwazvo, asi kudzivirira mapepa asina kudiwa, ezvinganetseka uye mapeji evanhu vakuru anokosha pakuchengetedza kwedu paIndaneti. Dzimwe nguva vashandisi vanoendeswa kunzvimbo dzisinganzwisisi mabhuku kana web content, uye ivo vanomanikidzwa kuisa pazvipo. Kana nyaya idzi dzichijairika, unofanira kudzivisa mawebhusayithi ose asingaoneki pa web browser yako, Google Chrome.
Pano Michael Brown, nyanzvi inotungamira kubva kune Semalt , ataura nezvenzira dzinofadza uye dzakakurumbira dzekuvhara mawebhusayithi paChrome - mobile website design company.
1. Dzai Muongororamiro Mududziro Mifananidzo
Yokutanga uye yakanakisisa sarudzo inogadzira mapurogiramu akashandiswa nemunhu. Izvozvo zvinoreva kuti hazvidi kuti zviwedzere, izvo zvinoreva kuti iwe unogona kudzivirira nyore vana vako kushanyira mawebsite asina kudiwa kana evanhu vakuru. Nehuwandu hwakadaro, unogona kuona zviri nyore mawebsite kana mapurogiramu asina kuchengeteka kumhuri yako uye unozvivharira pakarepo. Kuti uishandure muGoogle Chrome, chengetera pane menyu matatu-mavara mumitemo yako, uye pasi pevanhu chikamu chikamu, chengetedza paGadzirisa sarudzo. Pano unofanirwa kuwedzera munhu mutsva uye gadzirisa Chinodiwa chekuchengetedza usati wachengetedza zvirongwa. Pakupedzisira, endai kuGadzirisa sarudzo uye chengetedza paSarudzo yakachengetedzwa kuti uone kana mbiri yako yepamusoro yakasikwa kana kwete.
Ndiyo imwe yenzira dzakanakisisa uye dzakanyanyisa dzekuvhara mawebhusayithi paGoogle Chrome. Kana uri kutarisa kuvhara mawebsite kubva mumigumisiro yekutsvaga kweGoogle, MuBlock Block ndiyo yakakosha yekuti iwe neGoogle makazvipa kuvashandisi vayo vese..Kana uchangobva kuiswa zvakakwana, unogona kubatsirwa kubva pane izvi zvakasarudzwa zvakawanda zvekusarudza, zvakadai sokuenda kune dashboard uye Bvisa webhusaiti iwe iwe usingadi kuti vana vako vafambe. Muzasi, iwe uchaona sarudzo yeIndaneti Websites, iyo yaunogona kufamba nayo kuti uchengete mapeji ose akavharidzirwa.
Chimwe chezvinhu zvakanakisisa pamusoro peBlock Site ndechekuti ndeyechokwadi uye ndeyechokwadi. Kana wangove wakagadzira mawebhusayithi akavharidzirwa, zviri nyore kwauri kuti uwedzere izwi rekuvhara maSiteti kuitira kuti vana vako vasasvike nzvimbo dzakadziviswa kana zvinyorwa. Kana wapedza kuisa iyi kuwedzerwa, enda kune Zvisarudzo zvekusarudza uye wobva wawedzera nzvimbo yaunoda kudzivirira. Nzira inotevera ndeyokusvitsa bhokisi reKubvumira Bhuku reKutendesa uye usakanganwa kujekesa password yako usati wachengeta zvirongwa.
Hapana mubvunzo kuti, StayFocusd ndiyo yakanakisisa uye imwe yezvinyorwa zvakakurumbira zvekuvhara mawebhusayithi kwevashandi ve Chrome. Inoshanda zvakanaka zvose zve Facebook uye Gmail uye dzinopedza nguva yauchazoshandisa pane nzvimbo dzevanhu vakuru. Zviri nyore kutsanangura maawa kana zuva StayFocused inofanira kudzivirira mabasa ekufurisa. Kunze kwaizvozvo, unogona nyore nyore kugadzira mazita evharidzirwa uye akabvumira mawebsite. Imwe nzira yakasarudzwa ndeyeNyukliya sarudzo. Izvi zvichakubatsira iwe kudzivirira webhusaiti yekushungurudza kwemwedzi mishoma kana makore.
5. Nanny yeGoogle Chrome
Nanny ndeyekuwedzera kunokosha kune zvakawanda zvekusarudza uye zvinhu. Inobatsira kusika vatsvene vemaiti, inotsanangura nguva yaunofanira kupedza pane peji yewebhu uye unotarisira kuvhara kusvika pamwero. NaNanny yeGoogle Chrome, unogona kuvhura mawebsite akawanda sezvaunoda. Ingoenda kuBlock URLs chisarudzo uye wobva wawedzera zita rewebsite iwe unogona kudzivisa. Zvinogoneka kutsanangura nguva yaunoda kuvhura imwe nzvimbo. Dzvanya paBhokisi reKachengetedza kana wapedza.